Miara-miasa Amin’ny Tanora Guatajiagua Mba Hamelona Indray ny Teny Potón Ao El Salvador · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2017 5:38 GMT
Ity no fanavaozam-baovao fahatelo momba ny tetikasanay, nahazo vatsy tamin'ny fikatrohana nomerika ho an'ny teny indizeny. Mamoaka lahatsoratra manasongadina ny fivoaran'ireo nahazo vatsy tompon-kevitra tamin'ity fisantarana andraikitra ity.
Noho ny fahalianan'ny tanora handray anjara, sy eo ambany andraikitry ny mpikambana sasany ao amin'ny Filankevi-Pitantanan'ny ACOLGUA, dia nizotra ny fotoam-pivoriana telo, voamariky ny fianarana mavitrika sy mifanakalo hevitra mifototra amin'ny fifampitokisana sy ny fifanajana.
Ho ao anatin'ny bokikely nomerika hamelomana indray ny teny Potòn ny fitaovam-pianarana noforonin'ny tanora.
Nandritra ireo fotoana ireo sy ny fampiasana bokikely fampianarana hanaovana ity fizaran-draharaha fianarana ity, nisy ireo paikady isan-karazany naroso hanatrarana tanjona roa: ny iray dia ny fitantanana ny fitaovana nomerika toy ny solosaina sy ny fandraisam-peo, ny faharoa dia ny fampifanarahana ireo dingana isan-karazany amin'ny fitarihana fanadihadiana sy fanoratana naoty amin'ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny fampiasàna onjam-peo nomerika.
Mba ahafahana miatrika ny tanjona iray hafa, dia ny famadihana ho nomerika ny bokikely fianarana teny Potón, nisy ny fanatontosana fakan-kevitra mba hanapahana izay lesona ampidirina ao amin'ny bokikely ho atao nomerika, amin'ny fampiasàna ny feon'ireo tanora mpandray anjara, ohatra, lesona momba ny firafitry ny trano, ny faritry ny vatana sy ireo hevitra fototra amin'ny teny Potón.
Iray amin'ireo fanavaozana nandritra ity tetikasa ity ny fanomezana endrika indray ny bokikely efa misy amin'ny teny Potón izay fototr'ity dingana ity ary notontosain’ ireo mpianatra taona fahadimy ao amin'ny Oniversite Don Bosco ao amin'ny departemantan'ny Graphic Design [Haibika An-tsary]. Nitsidika ireo vondrom-piarahamonina roa ny mpianatra ary nianatra ny zava-misy ao amin’ ireo toerana ireo amin'ny fomba mivantana; nahatonga azy ireo hahafantatra ny maha zava-dehibe ny fanamafisana ny “fanondroana ara-kolontsaina” nifantoka tamin'ny fitenin-drazana izany.
Ho asaina amin'ny fampahafantarana ny bokikely amin'ny teny Potòn sy Pisbi ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny ireo mpiantsehatra lehibe ao amin'ny kaominin’ izy ireo, toy ny ben'ny tanàna, ny goverinora, ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonin'ny fanabeazana, miaraka amin’ ireo solontenan'ny Minisiteran'ny Fampianarana, ary ho asongadina ihany koa ny tenin-drazana avy amin'ny faritra atsinanan'ny firenena.